हाम्रो बारे > जे। Tkach देखि कर्मचारी पत्र > MB 2015 अक्टोबर
१ Rome रोममा हुँदा पावलले फिलिप्पीको मण्डलीलाई लेखेको पत्रमा उनले हामीलाई आनन्द र आनन्दबीचको भिन्नता बुझ्न मदत गरे। यस पत्रमा उनले १ joy पटक आनन्द, आनन्द र आनन्द शब्दहरू प्रयोग गरे। मैले धेरै कारागार र नजरबन्द केन्द्रहरूमा भ्रमण गरेको छु र सामान्यतया तपाईले त्यहाँ खुशी व्यक्ति भेट्नुहुने छैन। तर जेलमा झ्यालखानामा थुनिएका पावल आफू बाँच्दछन् वा मरे पनि जान्छन् भन्ने कुरामा खुशी भए। ख्रीष्टमाथिको उनको विश्वासको कारण, पावलले आफ्नो परिस्थितिलाई विश्वासको आँखाले हेर्नको लागि प्रायः मानिसहरूले देख्ने भन्दा भिन्नै प्रकाशमा हेर्न तयार थिए। फिलिप्पी १: १२-१-16 मा उनले के लेखेका थिए याद गर्नुहोस्:
«मेरा प्रिय भाइहरू! तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि मेरो पूर्व-परीक्षण हिरासतले सुसमाचारको प्रसारलाई रोक्न सकेन। यसको विपरित! यो कुरा यहाँ मेरा सबै गार्डहरू र अन्य प्रक्रियाहरूमा पनि स्पष्ट भयो जुन म ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछु त्यसैले मात्र मलाई लक गरिएको छ। यसबाहेक, मेरो बन्धनमा परेका थुप्रै ख्रीष्टियनहरूले नयाँ साहस र विश्वास पाएका छौं। तिनीहरू निडर र निडर भएर परमेश्वरको वचन प्रचार गरिरहेका छन्।
यी सशक्त शब्दहरू परिस्थितिहरूको बाबजुद पावलले भोगेको भित्री आनन्दबाट आएको हो। उनी जान्दछन् कि ऊ ख्रीष्टमा को थियो र ऊ ख्रीष्टमा कुन मानिस थियो। फिलिप्पी 4,11: ११-१-13 मा उनले लेखेका थिए:
My मैले यो मेरो आवश्यकतामा तपाईंको ध्यान आकर्षित गर्न भन्दिन। अन्तमा मैले जीवनका सबै परिस्थितिहरूको सामना गर्न सिकें। मेरो थोरै होस् वा धेरै, म दुबैसँग धेरै परिचित छु, र त्यसैले म दुबैसँग सामना गर्न सक्छु: म पूर्ण र भोको छु; म अभाव र प्रशस्तबाट ग्रस्त हुन सक्छ। यी सबै कुरा म ख्रीष्टमार्फत गर्नसक्छु, जसले मलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुन्छ।
हामी सुख र आनन्द बीचको भिन्नता लाई धेरै मानेमा संक्षेप गर्न सक्छौं।
खुशी अस्थायी हो, प्राय: एक क्षणको लागि, वा छोटो अवधिको सन्तुष्टिको परिणाम। आनन्द अनन्त र आध्यात्मिक छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उसले के गरेको छ, उसले के गरिरहेको छ र के गर्नेछ भनेर जान्नको लागि महत्वपूर्ण छ।
किनभने खुशी धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। यो अस्थिर छ, गहिरो वा परिपक्व। परमेश्वर र सबैसँग हाम्रो सम्बन्ध बढ्दै जाँदा आनन्द बढ्छ।
खुशी अस्थायी, बाह्य घटनाहरू, अवलोकन र कार्यहरूबाट आउँदछ। आनन्द तपाईंमा छ र पवित्र आत्माको कामबाट आउँदछ।
राष्ट्रपति GRACE समुदाय इंटरनेशनल
क्षणिक खुशी बनाम चिरस्थायी आनन्द